Fahad Yaasiin oo la soo baxay awoodo xad dhaaf ah oo ka dhan ah shaqaalaha Madaxtooyada – XAMAR POST
Fahad Yaasiin oo la soo baxay awoodo xad dhaaf ah oo ka dhan ah shaqaalaha Madaxtooyada
Agaasimaha Madaxtooyada Villa Soomaaliya Fahad Yaasiin ayaa la soo baxay awoodo uu u adeegsanayo shaqaalaha Madaxtooyada, iyadoo maalmihii la soo dhaafay uu soo saaray warqado uu xilka uga qaadayo shaqaalaha madaxtooyada ka howl galayay, waxaana daba socday warqado amar ah oo ah in aanay Madaxtooyada soo geli karin, xubnaha uu ka qaado xilka.
Agaasime waaxeedyada uu xilka ka qaaday ayaa sheegay in loola dhaqmay si ka baxsan nidaamka dowliga, iyadoo qaarkood inta xafiisyadooda askar loogu geeyay, xoog looga soo saaray, waxaana la sheegay in albaabka Madaxtooyada laga dhigay warqad looga mamnuucayo in aysan soo geli karin.
Agaasime waaxeedyada la eryay oo gaarayay illaa shan xubnood aan la xiriirnay ayaa inoo sheegay in aanay garaneyn sabab loo ceyriyay, isla markaana aan xataa la su’aalin hadii qalad ama dambi galeen.
“Waxaa anagoo joogna xafiiska oo aan gudaneyno howl maalmeedkeena waxaa nagu soo galay askar wadata warqado amar ah oo nagula amrayo inaan dibada uga soo baxno xafiiska, marka weydiinay sababta, waxay noo sheegeen in shaqada nagala joojiyay, xitaa ma jirin su’aal kale, si jujuub ku jira ayaa dibada noola saaray”ayuu yiri mid ka mid ah Agaasime waaxeedyada la eryay oo aan la xiriirnay.
Sidoo kale waxaa ay sheegeen in xataa hadii shaqada laga bedelayo ama meel kale loo wareejinayo ay aheyd sidii qof shaqaale oo kale loola dhaqmo, balse laga dhigay dad dambiilayaal ah, isla markaana la soo saaray warqad looga mamnuucayo in aysan Madaxtooyada soo geli karin, taasoo ka hor imaaneysa xuquuqda muwaadinka, maadaama Madaxtooyada ay tahay meel Qaranka oo dhan u dhaxeysa, balse aanay aheyn meel shaqsiyaad gaar ah ku amar taagleeyaan.
“Qofka Shaqaalaha ah marka uu yahay nidaam la marsiiyo ayaa jira, qofka shaqaalaha wuxuu xaq u leeyahay marka shaqaalenimadiisa wax laga bedelayo in su’aal la weydiiyo, balse asoo su’aal la weydiin albaabka ka bax in la yiraahdo hab sharci ah ma ahan”ayuu yiri mid ka mid ah agaasime waaxeedyadii shaqada laga eryay.
C/raxiin Muudey ayaa ka mid ahaa shaqsiyaadkii u dambeeyay ee uu xilka ka qaaday Agaasime Fahad Yaasiin, isla markaana shaqadiisa ku wareejiyay Wasaarad kale, waxaana loogu daray in uusan soo geli karin Madaxtooyada iyo inuu wareejiyo furayaasga xafiiska iyo kaarka aqoonsiga.
Fahad Yaasiin oo la wareegay Agaasinka Guud ee Madaxtooyada bishii May ayaa tan iyo xilligaas ayaa la soo baxay hab dhaqan cusub, iyadoo aanu waligiis xil dowlad soo qaban, isagoo adeegsanaya awoodo xad dhaaf ah, hadba shaqsiyaadka uusan dooneyn inay Madaxtooyada ka sii shaqeeyaan.
DEG DEG: Dagaalyahanada Shabaab oo la wareegay Deegaan muhiim ah
WAR CUSUB: Kenya oo Cabsi gelisay Soomaaliya & Diyaarado dagaal oo lasoo dhoobay Xaduuda…